Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy mihemotra intsony ny fifidianana” | NewsMada
Praiminisitra Ntsay Christian: “Tsy mihemotra intsony ny fifidianana”
“Mbola betsaka ny ahatsapana eto amin’ny tany sy ny fanjakana fa maro ny sakantsakana tsy hipetrahan’ny fitoniana. Tsy misy fifidianana azo atao raha tsy misy ny fitoniana amin’ny alalan’ny zavatra maro: ny fandraisantsika andraikitra.”
Izay ny anisan’ny nambaran’ny Praiminisitra Ntsay Christian tamin’ireo olom-panjakana any Antsirabe, afakomaly, momba ny resaka etsy sy eroa ny amin’ny tokony hanemorana ny fifidianana. Tsy mihemotra intsony ny fifidianana, ary efa miroso amin’ny fikarakarana sy fanatanterahana izany ny eo anivon’ny governemanta.
Ilaina ao anatin’ny firosoana amin’ny fanatanterahana ny fifidianana ny fitoniana. Izay ny mahatonga azy sy ny governemanta nandray fanapahan-kevitra maro hametrahana izany fitoniana izany mba hiainan’ny vahoaka.
Mila averina ny hasin’ny fahefam-panjakana
“Ny fametrahana ny fandriampahalemana no hirosoantsika amin’izany fifidianana izany. Tsy hisy fandriampahalemana eto amin’ny firenentsika raha tsy mipetraka araka ny tokony ho izy ny hasin’ny fahefam-panjakana”, hoy izy.
Raha tiana ny hampanjakana ny fandriampahalemana, ary ao anatin’izany no hahazoana miroso amin’ny fifidianana: tokony hoeken’ny besinimaro ny hasin’ny fahefam-panjakana. Tokony handray ny fandaminana sy ny fandrindrana asa amin’ny fahefam-panjakana ny mpitandro filaminana.
Mahasahana zavatra maro ny fomba fitantanana raharaham-panjakana. Ao anatin’izany voalohany indrindra ny ady amin’ny kolikoly. Efa lasa lavitra loatra ny sehatra, indrindra ny olana goavana, momba ny kolikoly eto anivon’ny firenena.
Olon’ny fanahy, olon’ny fo, olon’ny saina isika Malagasy. “Ezaka andrasana amintsika rehetra ny ady amin’ny kolikoly“, hoy ihany izy.